Nanararaotra ny mpivarotra : nidangana avokoa ny vidin-tsakafo ny faran’ny taona | NewsMada
Nanararaotra ny mpivarotra : nidangana avokoa ny vidin-tsakafo ny faran’ny taona
Fotoana fanararaotan’ny mpivarotra ny faran’ny taona teo. Ho an’ny sakafo, saika nidangana avokoa ny vidin-kena, ny trondro, ny akoho amam-borona teny an-tsena.
Tsy maintsy mividy! Tsy mba manaraka ny lalàn’ny tolotra sy ny tinady ny eto amintsika. Rah any tokony ho izy, mora na midina ny vidin-javatra rehefa mitombo ny mpividy na tinady, nefa vao mainka midangana. Tena nahitana izany ny andron’ny alakamisy 31 desambra raha ny teny amin’ny tsenan’Andravoahangy, Analamahitsy, Mahazo, Analakely, sns.
Santionany taterina eto, lasa 15.000 Ar ny kilaon’ny trondron-dranomamy (karpa, tilapia, trondro gasy), lasa 15.000 Ar ny kilao raha 8.000 Ar hatramin’ny 10.000 Ar. Tafakatra 12.000 Ar hatramin’ny 13.000 Ar ny kilaon’ny henan-kisoa sy ny saosisy raha 10.000 Ar/kg tany aloha. Ho an’ny vorona gana voavolo, lasa 15.000 Ar ihany koa ny kilao raha 11.000 Ar/kg tany aloha. Tena nidangana koa ny vidin’ny akoho gasy satria lasa 14.000 Ar hatramin’ny 15.000 Ar ny reniakoho raha 10.000 Ar taloha.
Niavaka koa ny vidin’ny atody tamin’ity faran’ny taona ity, satria lasa 500 Ar ny vidin’ny iray, raha toa ka 1.000 Ar ny telo, izany hoe, 350 Ar ny iray.
Hitohy sa tsia?
Fahita isaky ny vanim-potoana toy izao ny fanararaotan’ny mpivarotra. Na izany aza, manahy ny mpanjifa sao tsy hiova intsony ity fidangan’ny vidin-javatra, indrindra ny sakafo ity. Efa niakatra nanomboka ny volana desmbra teo ny vidin-javatra hafa, toy ny simenitra, ohatra. Manodidina ny 24.000 Ar, farafahakeliny, ny vidin’ny iray lasaka (50 kgs) raha toa ka 23.000 Ar tany aloha. Mitovy amin’io avokoa ny simenitra vita eto an-toerana sy ny avy any ivelany. Tsy misy ny fanazavana, fa mety anisan’ny mahatonga izany ny hetra vaovao Advanced Cargo Declaration (ACD) noteren’ny fanjakana ampiharina, nanomboka ny 1 desambra teo.
Nisy fiakarany avokoa ny vidin-javatra rehetra eto amintsika, na vokatra eto an-toerana na ny afarana avy any ivelany.